Soosaarka Sare ee Shiinaha 9KW 300L / min Masarka Maaskaro Maqaarka Mashiinka Samaynta iyo soosaarayaasha | Frand
Soo Saarid Sare 9KW 300L / min Mashiinka Mashiinka Maaskaro Samaynta
Habka xakamaynta: Xakamaynta PLC
Weigtht: ku saabsan 2Ton
Qaab dhismeedka maaskaro wajiga: 3-4 lakab
Mashiinka qaadashada maaskaro madhan. Waa mashiinka masraxa hore ee wax soo saarka maaskaro wajiga oo aan tolmo wanaagsan lahayn, waa mashiin si buuxda otomaatig u ah inuu soo saaro waji madhan oo ka yimaada quudinta alaabta ceeriin, gelinta & goynta silig sanka ah, qashin, oversge, alxanka ultrasonic ilaa goynta gabalka. waxaana lagu aruuriyay xamuulka.
Faahfaahinta Mashiinka Maaskarada Sameynta
220V 60HZ ama la qaabeeyey
300L / daqiiqo
Soo saarista maaskaro wajiga
aan tolmo lahayn
Qaab dhismeedka maaskaro wajiga
ku saabsan 2Ton
Hawlaha Mashiinka Sameynta Maska la tuuro:
Mashiinkaani wuxuu leeyahay aluminium haysa. Muuqaalku waa mid fudud oo qurux badan. Waxay ku dhammeyn kartaa sameynta muujinta hal mar iyadoo wasakhda saxda ah. Iyada oo la adeegsanayo ultrasonic awood sare leh oo la soo dhoofiyo waxay si adag u dhejin kartaa walxaha qashinka si toos ah ayaa loo soo saari doonaa. Xakamaynta barnaamijka kombiyuutarka iyo ogaanshaha sawir qaadaha ayaa ka dhigaya mid leh kalsooni sarreysa iyo heerka guuldarrada hooseysa. Shayga waxaa si weyn loogu isticmaali karaa wasakheynta warshadaha sare, warshadaha iyo miinooyinka.
Astaamaha Mashiinka Sameynta Maaskaro La Tuuri karo:
1. Ansixi farsamada mashiinka asalka ah ee Jarmalka, oo ah muuqaalka maaskaro isku laaban, samee sanka sanka iyo maaskaro jirka mar uun ku dhammee koontaroolka tooska ah ee farsamada ultrasonic. Tayada joogtada ah iyo waxtarka sare.
2. Ka dhigi kara maaskaro ka kooban 2-5 lakab ceeriin halkii loo baahdo.
3. Kani waa ka duwan yahay mashiinka maaskaro kale ee isku laaban, kani wuxuu rakibayaa qeybta galinta sanka: sanka ayaa la galiyaa marka la soo saarayo maaskaro aan u baahanahay, ka dib laalaab alxanka iyo sameynta, tani waxay hagaajineysaa otomaatigga waxayna badbaadineysaa kharashka shaqada ee soo saaraha.
4. Xakamaynta PLC, tirinta otomaatiga ah, Hawl fudud, soosaarka quruxda badan.
5. Xakamaynta mootada adeegga, xakamaynta cabbirka saxda ah.
6. Mashiinka mashiinka laga sameeyay aluminium, qaybaha leh dahaadhka, muuqaalka quruxda adag iyo wax ku ool ah.
1 Dammaanad: 1 sano laga bilaabo taariikhda rarka. Haddii waxyeello inta lagu jiro muddada uu keenay Iibiyaha, Iibiyaha ayaa markaa ku siin doona dayactir bilaash ah goobta iyo beddelaadda qaybta bilaashka ah (Gaar ahaan qaybaha dhaqso u xir-xiran).
2 Iibiyaha ayaa bixiya adeegga dayactirka nolosha oo dhan, kaliya kharashka shaqada ayaa loo baahan doonaa haddii uu ka gudbo muddada damaanadda. Haddii wixii waxyeelo ah ay u baahdaan beddelaad qayb isla markaana Iibiyaha aan lagu eedeyn, iibiyaha wuxuu xaq u leeyahay inuu weyddiisto qiimaha agabka loogu beddelayo.
3 Iibiyaha ayaa kaga jawaabi doona wixii sheegashooyinka cilladaha ah 4 saac gudahood taleefan, emayl, iyo fakis. Adeegyada dayactirka ee gobolka Fujian 36 saacadood gudahood, banaanka gobolka Fujian 72 saacadood gudahood. Beddelka qaybaha, waqtiga dhabta ah waa laga wada xaajoon karaa intaas dheer.
4 Iibiyaha wuxuu siiyaa tababar bilaash ah shaqaalaha howlgalka.
5 Iibiyaha ayaa sidoo kale bixin doona macluumaad farsamo oo laxiriira, oo ay kujiraan tilmaamaha howlgalka & sawirada qeybaha xirashada dhaqsaha badan
Hore: 1550KG 1 Wajiga 50-55 kumbiyuutarada / Min Mashiinka Soo-saarista Maska
Xiga: 55pcs / min 6KG / cm2 Mashiinka Waxsoosaarka Maaskarada Oo Loogu Tala Galay Xakamaynta Waxyaabaha Maaskarada ee Aan La Xidhin
A1: Waxaan nahay mashiinada waxsoosaarka waxsoosaarka waxsoosaarka iyo waxaan si fiican uheleynaa OEM iyo adeegga iibka kadib.
Q2: Sideen ku ogaan karaa in mashiinkaagu si fiican u shaqeynayo?
A2: Kahor bixinta, waxaan tijaabin doonaa xaalada mashiinka ku shaqeynaya adiga.
qalabka sameynta maaskaro
mashiinka wax soo saarka maaskaro
Mashiinka qaadashada maaskaro aan tolmo wanaagsan lahayn
Saddex Lakab oo Qalliinka Maaskaro ah ee Wajiga Caafimaadka ...
10KW 30-40PCS / Min Automatic Wajiga Samaynta ...
Maaskaro wasakhda Caafimaadka ee Mashiinka Lagu Sameeyo Alum ...
Si buuxda otomaatiga ah la tuuro Nonwoven 3 Lakabka Fac ...
40 Cadad / Min N95 Mashiinka Mashiinka Maaskarada
Xawaaraha Sare Mashiinka Sameynta Maska Maskaxda ee N95 Si buuxda Otomaatig ah
mashiinka sameynta maaskaro wajiga qalliinka, Mashiinka qaadashada maaskaro aan tolmo wanaagsan lahayn, aan tolmo wanaagsan lahayn mashiinka qaadashada maaskaro, Mashiinka haysa tuubada, mashiinka sameynta maaskaro qalliin, mashiinka sameeyaha maaskaro,